လမ်းနှစ်သွယ် | Calvary Burmese Church
စာရှုသူအဆွေသင်သည် ဤလောကထဲမှ တစ်နေ့ ပျောက်ကွယ်သွားရမည်ကို သတိ ပြုမိပါ သလား။ “သေတစ်နေ့၊ မွေး တစ်နေ့” ဟု ထင်ကောင်း ထင်ပေလိမ့်မည်။ မှန်ပါသည် “သေ တစ်နေ့၊ မွေးတစ်နေ့” ဖြစ်၍ကြောက် စရာကောင်း ပါသည်။ လူသည် တစ်ခါတည်း သေ၍ အပြစ်စီရင်ခြင်း ခံရပေဦးမည် (ဟေဗြဲ၊၉း၂၇)။ အဆွေ၏ အပုပ်ကောင်သည်။ သင်္ချိုင်းကုန်းတွင် လမ်းဆုံးသော်လည်း၊ ၀ိညာဉ် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရဦးမည်။ သေပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဟု အဆွေထင်ကောင်း ထင်ပေလိမ့် မည်။ အဆွေ၏၀ိညာဉ်သည် မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုသိပါသလား။ “လူသည် စကြာဝဠာကို အကြွမ်းမဲ့အစိုးရ၍ အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးလျှင် အဘယ်အကျိုးရှိမည်နည်း။ အသက် ၀ိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်မည်နည်း။” စကြာဝဠာနှင့်တန်းဖိုးမဖြစ်နိုင်အောင် တန်းဖိုးရှိသော အဆွေ၏၀ိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရရန် ဤ စာစောင်ကို မေတ္တာနှင့်ရေးသား ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
2 comments on “လမ်းနှစ်သွယ်”	Nan Nwe Nwe	April 5, 2012
Please kindly send myanmar font file to me that you’re using. I would like to read but I can’t read because I don’t have the myanmar font file. Thank you so much indeed. God bless you.
Reply	thawngno	April 5, 2012
Thank you for reading CBC blog. I use zawgyi font. You can download it freely from http://www.missionforchrist.net/ or http://www.zawgyi.net/ After download it, you have to install it, If you still can’t read it after installing, change you web browser. If you use internet explorer to browse website, you need to update or change some setting, otherwise you can not read myanmar font. The easiest way to read CBC blog is just click the PDF icon that appear on the right coner of the article. You can read even if you don’t have Myanmar fonts. God bless you.
This entry was posted on April 4, 2012 by thawngno in Article Salvation and tagged salvation.	Shortlink